ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်နေသော နိုင်ငံတော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်နေသော နိုင်ငံတော်
ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်နေသော နိုင်ငံတော်
Posted by Zaw Wonna on Dec 27, 2010 in Drama, Essays.. | 15 comments
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နှင့် စီးပွားရေး ။ ။ သိသာထင်ရှားစွာပင် တိုးတက်နေပြီဖြစ်သည်။ ဘွဲ့ရလူငယ်များအနေဖြင့် ဆိုက်ကားသမား၊ ကွမ်းယာသည်၊ ဂျာနယ်လက်ပွေ့ရောင်းသူ အစရှိသဖြင့် တပိုင်တနိင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထူထောင်နိုင်သကဲ့သို့ အရောင်းစာရေး၊ စားပွဲထိုး၊ စပယ်ရာ စသည့် လခစားအလုပ်များတွင်လည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန် လစာများဖြင့် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပြီဖြစ်သည်။ အစိုးရ၀န်ထမ်း အပိုင်းတွင်လည်း အသိပညာ အတတ်ပညာများ လွန်စွာပြည့်စုံသည်ဟု ထင်ရသော အရပ်ဝတ်လဲ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ထိပ်ပိုင်းရာထူးများတွင် တာဝန်ယူစေပြီးဖြစ်သည်။ ပညာမတတ်သူများပင်လျှင် အနှိပ်ခန်း။ ကာရာအိုကေ။ အလှပြင်ဆိုင်။ နိုက်ကလပ်များတွင် လွယ်လင့်တကူ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် လမ်းဖွင့်ပေးထားလျက်ရှိသည်။ ကလေးသူငယ်များမှအစ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွင် စားပွဲထိုးနေပြီဖြစ်သဖြင့် မကြာမတင်ကာလတွင် ကမ္ဘာ့အလယ် အလုပ်လက်မဲ့အနည်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ၀င့်ထည်နိုင်တော့ မည်ဖြစ်သည်။
စွမ်းအင် ။ ။ နောက်ချေး မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း၊ ကြက်ဆူဆီမှ လောင်စာဆီထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများကပါ လက်ဖျားခါသွားရသည်အထိ တိုးတက်လျက်ရှိသည်။ သို့သော် သနားကြင်နာတတ်သော မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် တိရိစ္ဆာန်များကို မနှိပ်စက်လိုသဖြင့် အစိုးရမှ ဖြန့်ဖြူးပေးသော ဓါတ်အားကိုသာသုံးစွဲကြသော်လည်း နိုင်ငံနှင့်အ၀ှမ်း မီးလာချိန်တွင် ထ်ိန်ထိန်လင်း နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို အလေးထားသဖြင့်လည်း ကြက်ဆူအစားထိုး ဒီဇယ် ဓါတ်ဆီများကိုသာ အများဆုံး သုံးစွဲနေကြလျက်ရှိသည်။
ကာကွယ်ရေး ။ ။ ဂျီသရီး မီးကျိုးမောင်းပျက် သေနတ်မှသည် အဏုမြူလက်နက် တပ်ဆင်ရန် ကြိုးပမ်းသည်အထိ ကြောက်ခမန်းလိလိ တိုးတက်လျက်ရှိသည်။ နှစ်စဉ် တပ်မတော်အရာရှိများ အများအပြား မွေးထုတ်နိုင်နေသဖြင့် နောင်အနာဂတ် တပ်မတော်တွင် စစ်ဆင်ရေးဆင်နွဲရာ၌ ဗိုလ်အဆင့်ကို အနိမ့်ဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်လာတော့မည် ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းရေး တည်ငြိမ်မှုကို ဖျက်ဆီးနိုင်သော အေးချမ်းစွာ ဆန္နပြမှုများကို ဖြိုခွင်းရန် ဖွင့်လှစ်သော တိတ်တိတ်ပုန်း တုတ်သိုင်း သင်တန်းများတွင်လည်း နေ့စားလပေး စွမ်းအားရှင်များ တက်တက်ကြွကြွ တက်ရောက်လျက် မခံမရပ်နိုင်သောပြည်သူများ အမည်ကိုခံယူရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေလျက် ရှိကြသည်။
ပညာရေး ။ ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် စူပါ စီးပွါးရေးသမားများ၏ သားသမီးများအားလုံးနီးပါး နိုင်ငံခြားကျောင်းများတွင် ပညာသင်ယူနေနိုင် ကြပြီဖြစ်သည်။ ပြည်ပတွင် မတက်ရောက်နိုင်သူများကိုလည်း အေးချမ်းစွာပညာသင်ကြားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ တက္ကသိုလ်များကို မြို့ပြင် ရွာနီးချုပ်စပ်များသို့ ပို့ဆောင်ပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းတွင်လည်း ၀ိဇ္ဖာ သိပ္ပံ နေ့တက် / အဝေးသင်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ရှေ့နေ၊ ဆရာဝန်၊ မဟာဘွဲ့၊ ပါရဂူဘွဲ့ စသည့် ပညာတတ်များ စက်နှင့်လှည့်ထုတ်သကဲ့သို့အရေအတွက်များစွာ နှစ်စဉ်ပေါ်ထွန်းနေပေသည်။ အထူးတိုးတက်သည့်အချက်မှာ ဘွဲ့ရ ပညာတတ်အားလုံးနီးပါး အမိမြန်မာစာကို ကောင်းစွာ ရေးတတ် ဖတ်တတ် ပြောဆိုတတ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတ၀န်းလုံးအတိုင်းအတာ အရဆိုလျှင် စာမသင်နိုင်သူများမှလွဲ၍ အားလုံး စာတတ်မြောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ၀မ်းမြောက်ဖွယ် တွေ့ရှိရပေသည်။
ဆက်သွယ်ရေး ။ ။ ပြည်သူများ ကွန်ပြူတာ အင်တာနက်နှင့် ထိတွေ့ချိန် ပိုမိုများပြားစေရန် ရည်ရွယ်၍ အင်တာနက်လိုင်းများ နှေးကွေးစေသဖြင့် လည်းကောင်း၊ အကျော်အခွ ဗဟုသုတတိုးပွါးစေရန် ရည်သန်၍ နိုင်ငံရေး ဆိုဒ်များကို ဘန်းထားခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း အဘက်ဘက်မှ စနစ်တကျမြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။ အခြေခံဆက်သွယ်ရေးဖြစ်သည့် တယ်လီဖုန်းဆိုလျှင်လည်း အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း တဖြေးဖြေး ကြိုးပမ်းလာမှုကြောင့် အနိမ့်ဆုံးဈေးမှာ နိုင်ငံတကာနှင့်ယှဉ်လျှင် အဆတစ်ရာကျော်ကျော်လေးသာ မြင့်တက်နေတော့သည်။ ယခု နှုန်းအတိုင်းဆိုလျှင် နောက်ထပ်အနှစ်လေးဆယ်မှ ခြောက်ဆယ်အတွင်း နိင်ငံတကာနှင့် တန်းတူပြည်သူတိုင်း သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အားတက်စဖွယ် တွေ့ရှိရသည်။ ဖုန်းလိုင်းများ များပြားလာသကဲ့သို့ ခေါ်မရခြင်း။ စကားသံမကြားရခြင်း။ မတ်ဆေ့ခ်ျ မှားယွင်းရောက်ရှိခြင်း ကဲ့သို့သော အသေးအဖွဲ ပြဿနာလေးများမှလွဲ၍ ပြည်သူအများစုမှာ စတိုင်ကျကျ ဖုန်းကို ပါးစပ်နားကပ်ပြီး ပြောတတ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
စိုက်ပျိုးရေး ။ ။ UNODC မှပင် အသိအမှတ်ပြုရသည်အထိ ဘိန်းစိုက်ပျိုးရေးတွင် အထူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် နေသည်။ နောင်အနာဂတ်တွင် ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာဒေသအဖြစ်ရောက်ရှိအောင် အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလည်း သက်ဆိုင်သူများမှ ကတိပြု ပြောကြားထားသည်။
စက်မှုလယ်ယာ။ ။ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများကို မယူမနေရ အိမ်တိုင်ယာရောက် လက်ငင်း၊ အကြွေး အဆင်ပြေသလို ဝေငှပြီးသဖြင့် လယ်ယာသမားတိုင်း အနည်းဆုံး စက်တစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်နေကြပြီဖြစ်သည်။ စာရွက်စာတမ်း နှင့် စာရင်းဇယားပေါ်တွင် လျာထားချက်ထက် ထက်ကျော်လွန်၍ ထွက်ရှိနေလျက်ရှိသည်။
ဆန်၊ ဆီ၊ သားငါး၊ ရေထွက်ပစ္စည်း ။ ။ အခြေခံစားကုန်များအားလုံး ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မှုကြောင့် ငွေကြေးတတ်နိုင်သူအားလုံး အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူစားသုံးနိုင်နေပြီဖြစ်သည်။ စားသုံးရန် မသင့်တော်သော ပုစွန်ထုပ်ကြီးများ၊ ငါးသလောက် အကောင်ကြီးများ၊ စံမီ ငါးရှဉ့်များကို နိုင်ငံတော်မှ အနစ်နာခံကာ အခြားတိုင်းပြည်များသို့ တင်ပို့ရောင်းချပေးလျက်ရှိသည်။
စီးပွားရေး အခြေခံကောင်းများ။ ။ ကုန်ဈေးနှုန်းများလည်း တည်ငြိမ်၍ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း အလွန်နည်းသဖြင့် ပြည်သူအများစုမှာ ကန်စွန်းရွက်နှင့် ငါးပိကဲ့သို့သော ဗီတာမင် ပြည့်ဝသည့် အစာများကို နေ့စဉ် စားသုံးနိုင်လျက်ရှိကြသည်။
လမ်း/ တံတား ။ ။ လမ်းများ တံတားများကို ငွေအား လူအားမြောက်များစွာ အကုန်အကျခံ၍ တည်ဆောက်ပေးခဲ့သဖြင့် ပြည်သူများမှာ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် အခွန်အခပေးပြီး ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ တံတားများမှာလည်း မဟာဗျူဟာကျကျ တည်ဆောက်ထားသဖြင့် ဆူပူမှုရှိလာပါက ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့လိုက်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများ အေးချမ်းစွာဘာမျှမသိရှိဘဲ နေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
သတင်းမီဒီယာ ။ ။ မီဒီယာများအနေဖြင့် သတင်းမှန်များကို ကြေးမုံနှင့် မြန်မာ့အလင်းကဲ့သို့ စောင်ရေအများဆုံး ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေသော သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြခွင့် ရရှိနေကြပြီဖြစ်သည်။ အခြားသော ဂျာနယ် များတွင် ဖော်ပြသော သတင်းများကိုလည်း စာပေစိစစ်ရေးနှင့် သဘောမတွေ့သော စာမူများမှအပ ကျန်သည့်ကြော်ငြာကဲ့သို့သော အရာများကို လွတ်လပ်စွာ ဖော်ပြခွင့်ရှိနေပြီ ဖြစ်ရာ မကြုံစဖူး ထူးကဲသော မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ရရှိနေကြပြီဖြစ်သည်။အနုပညာရှင်များကိုလည်း မသီဆိုရ၊ မရိုက်ကူးရ၊ မထုတ်လုပ်ရ ဟု ပိတ်ပင်သည်မှ လွဲ၍ အသက်ကိုရန်မရှာဘဲ လွတ်လပ်စွာ ဖျော်ဖြေနိုင်သည် ဖြစ်ပေသည်။
နိုင်ငံခြားရေး ။ ။ ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်း ပြည်ပထွက် အလုပ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ပတ်စ်ပို့ရုံးတွင် နိုင်ငံသားတိုင်း ထုတ်ယူကိုင်ဆောင်နိုင်ရန် သိန်းဂဏန်းမျှသော ငွေကြေးဖြင့် စေတနာကြီးမားစွာထုတ်ပေးနေလျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးတွင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံနှင့် သားအဖ၊ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် သမီးယောက်ဖ သဖွယ်ရင်းနှီးခင်မင်စွာဆက်ဆံလျက်ရှိရာ ကမ္ဘာ့တလွှားတွင် ရောက်ရှိနေကြသော ရွှေမြန်မာများမှာ မိမိတို့၏ ပတ်စ်ပို့အနီရောင်လေးများကို ပြသလိုက်သည်နှင့် တလေးတစား အရေးပေး ဆက်ဆံခံနေရလျက်ရှိပေသည်။
တွင်းထွက် နှင့် သယံဇာတ ။ ။ ကျွန်းသစ်၊ ရေနံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ ပတ္တမြား၊ ကျောက်စိမ်း၊ သစ်မွှေး၊ ရာဘာ၊ ကြိမ် အစရှိသည့် ငွေရပေါက်ရလမ်းရှိသည့် အရာအားလုံးကို စီမံကိန်း လျာထားချက်ထက် ကျော်လွန်အောင် တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ရရှိလာသော ဘဏ္ဏာငွေများမှာ လွန်စွာ များပြားသော်လည်း တိုင်းတပါးမှ မျက်စေ့ကျ ကျူးကျော်မည်စိုးသောကြောင့် စာရင်းမပြဘဲ တာဝန်ရှိသူများက အနစ်နာခံ ထိန်းသိမ်းပေးထားလျက်ရှိသည်။
ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ။ ။ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံပြည်သူများအတွက် အလှုငွေများကို တက်တက်ကြွကြွ ထိန်းသိမ်းပေးထားခြင်း၊ စေတနရှင်များမှ လှုဒါန်းသော ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများတွင် နာမည်တပ်၍ လှုဒါန်းခြင်း စသည်များကြောင့် နိုင်ငံတော်၏ စေတနာကို သေချာစွာ
နားလည်သဘောပေါက်လာလျက် ရှိကြသည်။ အလှည့်ကျမီးလောင်သော ဈေးများကိုလည်း အမြန်ဆုံးကန်ထရိုက်ပေး၍ အဆင့်မြင့် ဈေးသစ်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းကြောင့်လည်း “ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေ” ဟူသော မေတ္တာပို့သံများကိုလည်း ဝေေ၀စည်စည် တိုင်းပြည်အနှံ့ ကြားသိနိုင်နေပြီ ဖြစ်သည်။
အားကစား ။ ။ ဤကဏ္ဍတွင်လည်း အထူးတလည် ရှင်းပြစရာမလိုအောင်ပင် တိုးတက်နေသည်မှာ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနေရှင်နယ်အာဖရိကန်လိဂ် ကိုလည်း ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ကျင်းပကာ အရည်အသွေး ထက်မြက်သော နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ဘောလုံးသမားများ
မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်း နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများတွင် အောင်ပွဲအလီလီ ဆင်နိုင်လုနီးနီး အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်၏ ထောက်ပံ့အားပေးမှုများကြောင့် အားကစားသမားများမှာလည်း တက်တက်ကြွကြွ ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်မှာ မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာကိုလွှမ်းရန် လက်တကမ်းအလို သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားနေပေသည်။
ကျေးစေတမန် ဘလော့ မှ ရေးသူအမည်မသိ ကွန်မင့်ကို ကူးယူ ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဟားဟား…… ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက ပုံထဲမှာ ခရီးသွားတွေ စုပြုံတက်စီးနေတာ နွားလှည်းမဟုတ်လို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပြီဆိုပြီး ဝမ်းသာအားရ ဖြစ်နေကြသတဲ့။
ုရေးထားတာတွေ အားလုံးက ကွက်တိပဲ…စိတ်မကောင်းစရာ တစ်ခုက တနေ့က မြန်မာတိုင်းထဲက အလုပ်ကြော်ငြာမှာ ကလေးထ်ိန်းအလုပ်ခေါ်တာ ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်တဲ့..
အင်း .. မကြာခင် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုလာပြီး တူးကြ ဆွကြ လမ်းတွေဖေါက်ပြီး လမ်းဘေးက ရွာလေးတရွာ အဖြစ်
ငွေစက္ကူများကို နိုင်ငံတော်မှ အကုန်အကျခံကာ အများအပြားမရိုက်နှိပ်တော့ပဲ ထားလိုက်သဖြင့် လူအပေါင်းတို့မှာ ငွေစက္ကူ၏တန်ဖိုးကို များစွာနားလည်လျှက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရ၏။ အချို့ မှာ ကုန်ပစ္စည်းချင်းလဲလှယ်စံနစ်(ဘာတာစံနစ်)ကိုပင် အထူးတလည် သင်ပြစရာမလိုပဲ ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရလေသည်။ သကြားလုံး၊ ဘောပင်၊ တစ်ရှုးပေပါစသည့် အသေးအမွှား လူသုံးပစ္စည်းလေးများမှာလည်း ကြားခံပစ္စည်းများအဖြစ် ထိရောက်စွာ လှည့်ပါတ်ကူညီနေနိုင်လေသည်။
ဘဏ်စံနစ်မှာလည်း အများပြည်သူများပိုင်ဆိုင်ငွေကို စိတ်ကြိုက်ထိမ်းချုပ်ကာ ငွေရှင်များအား ၄င်းတို့ပိုင်ငွေများကိုပင် ထုတ်ပေးချင်ပေးသည် မပေးချင်မပေးပုံစံမျိုးလုပ်နိုင်သည်အထိ အောင်မြင်သည်ကိုတွေ့ရ၏။ အချို့ မှာ မိမိငွေကို ပြန်ထုတ်ယူရန် ဘဏ်ဝန်ထမ်းတို့အား လဘ်ပေးကြသည်အထိပင် ရက်ရောကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရလေသည်။
ဒေါ်လာငွေမှာလည်း အမြင်ကပ်သူများအား ထောင်နှစ်ရှည်ချနိုင်သည်အထိ အကျိုးရှိသော ပစ္စည်းဖြစ်လာနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။.
လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်သူအား ဘိန်းမိသည်ထက်ပိုမိုထောင်ချနိုင်သော အစွမ်းထက်ဒေါ်လာငွေဖြစ်လာနေပါသည်။ သို့သော် ပြည်သူလူထုကြီးမှာ ဒေါ်လာငွေကိုပင်ငမ်းငမ်းတက်လိုချင်နေကြသည်ဖြစ်နေကြသဖြင့် ဘိန်းစွဲနေသော မြန်မာလူထုကြီးကဲ့သို့ဖြစ်အောင် စံနစ်တကျ ပုံစံသွင်းထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးလူငယ် ကလေးငယ်အရွယ်အထိ သာသနာရေးအတွက် အလွန်အမင်းအားစိုက်ကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်. အချို့ မှာ ရဟန်းဘုန်းကြီးများထက်ပင် ဘာသာသာသနာအတွက် အချိန်ပိုပေးကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ မည်သည့်ခေတ်အခါကာလမှ မပေါ်ခဲ့ဖူးသော တရားစခန်းကြီးများတွင် လူငယ်၊လူရွယ်အပေါင်းတို့သည် ဆိတ်ငြိမ်စွာနေလျှက်။ ထိုင်လျှက်၊လျှောင်းလျှက် ရှိကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
လူငယ်တို့၏သိလိုစိတ်၊ တိုးတက်လိုစိတ်အားလုံးကို သာသနာရေးတွင်ပုံအောထားကြသဖြင့် သောတာပန် ..ရဟန္တာများတဦးတယောက်မှ မထွက်လာသော်ငြား… အနည်းငယ်မျှသော လူငယ်လူရွယ်များသာ နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးတို့ကို လေ့လာ ဝေဖန်ဆန်းစစ်နိုင်တော့သည်ကို တွေ့ရ၏။
အထူးသဖြင့် အနာဂါတ်တိုင်းပြည်ကို မောင်းနှင်အုပ်ချုပ်ရမည့် လူလတ်တန်းစား လူငယ်လူရွယ်များ သာသနာရေးအထူးစိတ်ဝင်စားကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အနာဂါတ်ခေါင်းဆောင်များမှာ တပ်မတော်သားအရာရှိတို့ထံမှသာ ထွက်ပေါ်လာတော့ရန်အကြောင်းများရှိနေပါသည်။
( ဆက်ရေးရင် ၀ိုင်းဆဲတော့မှာမို့ .. အီမျှသာ.. )
ပုံက မိုက်တယ် ရှာထည့်ထားတာတော်တယ် ။ ကားလာနေတာကို ရှေ့တည့်တည့်က အလျှင်မြန်လေးရိုက်လိုက်တာလား …။ ရှေ့ကားကနေ နောက်ကားကိုလှမ်းရိုက်တာလားမသိပေမဲ့ မိုက်တယ် ။
အရမ်းမိုက်တယ် မန်းထားတာတောင်ဒီလောက် ကောင်းနေရင် ပိုစ့်ဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့တော့
ကိုခင်ဆက်မန့် ထားတာကပိုမိုက်တယ် ။ ဆက်မန့်ပါဗျို့
ဘယ်လို ပြောရမလဲတောင် မသိတော့ဘူး ။ အမှန်တွေ ပြောနေလိုက်ကြတာ .. ၀မ်းသာရမလား ..၀မ်းနည်းရမလား .တောင် မသိတော့ဘူး … ဟီးဟီး …
ကိုခိုင်ရေ.. ပြုမဲ့သူကပြုမှာပဲ ဖျက်မဲ့သူကဖျက်မှာပဲ။ ဆက်မဲ့သူကဆက်မှာပဲ ရပ်မဲ့သူကလည်းရပ်မှာပဲ။ သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုး တားမရဆီးမရပါ။ ပစ္စည်းမဲ့ဝါဒပေါ်လာတာ ကားလ်မက်စ်တို့ အိန်ဂျယ်တို့ ကြောင့်မဟုတ်ပါ၊ ကူမြူနစ်စနစ်ကျဆုံးတာလည်း အမေရိကန်စီအိုင်အေ တော်လွန်းလို့မဟုတ်။ ဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ် ပျက်ချိန်တန်ပျက်တဲ့ သဘောပါ။ ဒီသဘောတွေလိုက်ပြောလို့ လက်ခံသူကလက်ခံ လက်မခံသူကလက်မခံ သူ့ကံအတိုင်းပါ။ ဘာလို့ပြောနေကြလည်းဆို ပြောဖို့ကံပါလို့ ပြောတယ်၊ နားထောင်ဖို့ကံပါလို့ နားထောင်တယ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါလား။
ရိပ်သာလေးဝင်တိုင်း တရားရမယ် မထင်နဲ့။ တိုင်းရေးပြည်ရာ စိတ်ဝင်စားတိုင်းလည်း အပြောင်းအလဲအတွက် ပါမယ်မထင်နဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကလေးရဲ့ ဖြစ်ပုံကိုသိပြီး ပြု၊ဖျက်၊ဆက်၊ရပ်ကြတော့ မကောင်းဘူးလား။
အံ့သြဘွယ်ကောင်းသည်ကား ဤမျှနိုင်ငံတော်ကြီးအဘက်ဘက်က မတားနိုင်မဆီးနိုင် တိုးတက်နေသည်တို့ကို မလို၇ှုစိမ့် နိုင်ကြသော ထိုထိုနိုင်ငံကြီးများနှင့် BBC/ VOA/RFA နှင့် ပြည်ပသြဇာခံများက နိုင်ငံတော်ကိုနည်းမျိုးစုံနှင့် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေကြသည်မှာ နားမလည်နိုင်ဘွယ်ပင်။ ထိုမှတဖန် NLD ကဲ့သို့သော နိုင်ငံေ၇းအတိုက်အခံများ၏ ဆန့်ကျင်ဝေဖန်မှု များကိုလည်း အံ့သြခြင်းမကအံ့သြမိသည်။ ယင်းတိုးတက်မှုအပေါင်းကို အသိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြပါဆိုလျင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြးသန်းေ၇ွှ ကိုပြ၇မည်ပင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယင်းတိုးတက်မှုအပေါင်းတို့၏ အကြောင်း၇င်းခံကားသူ၏ အမြော်အမြင်ကြီးမားမှုကြောင့်ပင်မဟုတ်ပါလော။
နားမလည်နိုင်သောအခြားကိစ္စတခုကား ဤသို့သောအောင်မြင်မှုများစဉ်ဆက်မပြတ်၇၇ှိနေအောင်ဖန်တီးနိုင်သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအား နိုင်ငံတကာမှ အကျော်ဒေးယျတက္ကသိုလ်ကြီးများဖြစ်သော Harvard, Oxford, Cambridge စသည်တို့က PhD ကဲ့သို့သောဘွဲ့မျထိုးချီးမြှင့်၇န် မျက်စေ့လျှမ်းနေကြေ၇ာ့သလားဟု မောင်မိုးညိုကကြားမှဝင်၍ မခံချိမခံသာဖြစ်မိပါတယ်။ Nobel ဆုချြိမှင့်၇ာ Oslo လွှတ်တော်ကလည်း မေ့လျော့နေကြေ၇ာသလားမသိ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်၇ာအဖွဲ့အစည်းတွေက နည်းနာတွေလာေ၇ာက်သင်ယူဘို့ လက်တို့၇တော့မလောက်ဖြစ်နေသည်။
ဘာကြောင့်လူငယ်လူလတ်ကျားမ မေ၇ွးအပေါင်းတို့က ဤတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု သ၇ဖူဆောင်းနေသော နိုင်ငံကြီးမှ ၇၇ာနည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ထွက်ခွာနေကြသနည်း။
ကမ္ဘာ့လူဦးေ၇အားလုံး၏ ဤဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်နေသော အတွေးအခေါ်များကို မောင်မိုးညို နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေ၇သည်။ အသိညဏ်ခေါင်းပါးလှသော မောင်မိုးညို၏ တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှု သဘောတ၇ားကို စာဖတ်သူ အပေါင်းတို့က သည့်ခံကြပါတော့ ဟုသာပြော၇ပါတော့မည်။
ထိုမှတဖန်သမိုင်းနောက်ကြောင်းပြန်လျင် တပ်မတော်အစိုး၇၏ အနစ်နာခံမှုသမိုင်းကြောင်းကိုတွေ့၇မည်။ ၁၉၆၂ ကတကြိမ်၊ေ၉၈၈ ကတကြိမ် (အခြားဆူပူမှုများမပါ) နိုင်ငံတောကြီး ဂျောက်ထဲကျ၇န်လက်တကမ်းအလို တိုင်းပြည်၏ကံကြမ္မာကို မလွဲသာနိုင်တော့ဘဲ (မလုပ်ချင်ဘဲ ဟုအ၇ပ်ပြောပြောပါ၇စေ) ၀င်ေ၇ာက်တာဝန်ယူလိုက်၇သည်။ လုပ်ချင်လို့မဟုတ်။ သမိုင်းကတာဝန်ပေးလို့ဟု ဆိုပါ၇စေ။ တခါ သန်း(၆၀)သော လူဦးေ၇၇ှိသည့်နိုင်ငံတွင်လက်တဆုပ်စာ (၅၉ ဒဿမ ၉၉ သန်း)လောက်သော မပြောပလောက်သည့် လူတစု၏မကြေနပ်မှုကို မလွဲမေ၇ှာင်သာဘဲ လက်နက်ကြီးသုံး၍ ဖြိုခွင်းခဲ့၇သည်…။ အေ၇းခင်းတိုင်း ထောင်ဂဏန်းနှင့်ချီ၍ သေသည်ကိုေ၇းကြီးခွင်းကျယ်လုပ်ကြသူတွေကလည်းအပြည့်။
ယင်းကား တပ်မတော်အစိုး၇၏ အနစ်နာခံမှုများပင်…။ ကမ္ဘာတွင်စံနမူတင်၇မည့် တပ်မတော် မဟုတ်ပါလား…။
ယင်း ပြောင်မြောက်သော အဘက်ဘက်တိုးတက်မှု များကို လူထုကြားထဲတွင် မ၇ှက်မကြောက် ပြော၇ဲ ဆို၇ဲ လူကြားထဲလျှောက်၇ဲသော ပြည်သူ့သူ၇ဲကောင်းတဦးပေါ်နေကြောင်းကြား၇သည်။ “ငါးမင်းဆွေ” ဖြစ်ပါသည်။ (တချို့က “ဖား”) ဟုဆိုကြသည်။ ဖားသည်ဆိုသောဝေါဟာ၇ကားမြန်မာ့စာပေတွင်မ၇ှိခဲ့သည်မှာ ၁၉၆၂ နောက်ပိုင်းကတည်းကဖြစ်သည်။ .ယင်းငါးမင်းဆွေကဲ့သို့ လူမကြောက်သူမကြောက် သန်း (၆၀)သောလူထု၏ ဆန္ဒနှင့်ဆန့်ကျင်၇ဲသော သတ္တိကိုကားသြချ၇မည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစကားပြောလိုကြောင်း တောင်းဆို ခဲ့သည်။ တပ်မတော်အစိုး၇၏ ဘက်စုံအောင်မြင်မှုဒဏ် ကိုခါးစည်းခံနေ၇သော လူထုအပေါင်းကို မြင်အောင်ကြည့်တတ်သော ထိုငါးမင်းဆွေကို သမိုင်းကလည်းမေ့မည်မဟုတ်ကြောင်ပါ…။
ဟုတ်ပါတယ် … တို့အဖေ လုပ်တာဆို အကုန်ထောက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ ငါးမင်းဆွေလို ခေတ်ပျက် စီးပွားရေးသမားတွေ၊ ဒီခေတ်မှာ စားသာနေတဲ့ အကျင့်ပျက် ဝန်ထမ်းတွေ(တပ်မတော်သားအပါအဝင်)၊ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်သမျှ အရေး ဘာတစ်ခုမှ စိတ်မဝင်စားနိုင်ပဲ ကိုယ့်အရေးကိစ္စကိုသာ သိတတ်တဲ့ ကြားနေရေးသမားတွေ များနေသမျှ ဒီနိုင်ငံကတော့ ဒီလိုပဲ ဆက်သွားနေဦးမှာပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အစိုးရကိုပဲ ရတယ်ဆိုတာ မှန်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ပို့စ် အသစ်တင်လို့မရဘူးဆိုတာ မှန်ပေမဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်နိုင်ရင် ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ကျနော် ဒီပို့စ်ကို တင်ဖို့ နာရီ ၃၀ ကျော်လောက် စောင့်ခဲ့ရတယ်။ ဒါတောင် ပြည်ပကနေ တင်တာနော်။